Shirkada Wadatashiga Soomaaliyed ee ka socda Garoowe oo Maalintii labaad Galay – SBC
Shirkada Wadatashiga Soomaaliyed ee ka socda Garoowe oo Maalintii labaad Galay
Waxaa maalintii labaad galay kulanka wadatashiga Soomaaliyeed ee ka soconaya Magaalada Garoowe xarunta dowlada Puntland kaas oo looga hadlayo arimo dhowr ah oo quseeya Dastuurka iyo wax ka bedelka Ama Dhimista Baarlamanka Soomaaliya.
Xubnaha ka qeyb galaya Kulanka ayaa maanta isweydaarsaday Aarahyo ku aadan sidii looga bixilahaa Khilaafaadka soo noqnoqda loona heli lahaa Dastuur dalka oo dhan loogu talagalo uuna hirgalo.
Halkaasi waxaa hadalo ka jeediyay xubno ka mid ah golaha iyagoona taabtay arimaha uu ku taxaluqo shirkan, waxaana ka mid ahaa Wasiirka dastuurka iyo arimaha Fedraalka C.raxmaan Xoosh Jibriil, waxaanu sheegay in umada Soomaaliyeed ay ku jirtay mudo ka badan 20sano kumeel gaar loona baahan yahay sidii ay uga bixi lahaayeen .
Dr Cabdi Xasan Jimcaale waa wasiiru dowlaha Arimaha Dastuurka ee Dowlada Puntland waxaana uu sharaxaad ka bixiyay mar uu isna ka hadlay halkaasi qodobada ugu muhiimsan ee maanta kulanka la isugu yimid lagaga hadlayay isagoona xusay in qodobadaasi ay yihiin laba qodob oo muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed .
Sidoo kale Goobta waxaa ka hadlay Madaxweynaha Maamulka Galmudug Maxamed Axmed Caali Waxaana uu xusay sida uu ugu daraxsanyahay kulankan maanta uu kaga soo qeyb galay Magaalada Garoowe, isagoo tusaalena ugu muujiyay umada shacabka ah ee Soomaaliyed in dastuurka cusub ee ay yeelanayaan u noqdo mid miro dhal ah lana taageero.
Wakiilka Ururka Ahlusuna waljamaaca uga qeyb galaya Kulanka ka socda Magaalada Garoowe Maxamed Maxamuud Yuusuf ayaa isna hoosta ka xariiqay in uu horumarku gacanta umada soomaaliyeed ku jiryo hadii si daacad ah loogu shaqeeyo, taasi oo uu ugula jeeday in dastuurka la sameynayo uu noqdo mid shareecada islaamka ku saleysan, waxa uu ugu yeeray cadowga islaamkana meel looga soo wada jeesto.
Shirkan ayaa shalay ka furmay Magaalada Garoowe waxaana goob joog ah maamulada ka howlgala geyga soomaaliya Dowlada KMG ah ee Soomaaliya iyo weliba xubno ka kala socda Qaramada midoobay Midowga Africa iyo Beesha Caalamka .
SBC Intenational Garoowe